Degaannada doorashada iyo tirada ergooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Degaannada doorashada iyo tirada ergooyinka
Ka sokow diyaarinta habraacyada doorashooyinka Golaha Shacabka, shirka wadatashiga waxaa si weyn looga doodi doonaa wax ka badelka heshiisyadii hore ee doorashooyinka sida degaannada doorashada iyo tirada ergooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa berri lagu wadaa in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda Maamul goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaaadr, uu shir wadatashi ah uga furmo Muqdisho, kaas oo looga arrinsanayo wajiga labaad ee doorashooyinka.
Sida uu sheegay xaafiiska Ra’iisul wasaaraha, Waxaa kulanka diiradda lagu saari doonaa, dhowr arrimood, sida diyaar garowga doorashooyinka Golaha Shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, iyo raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka.
Sidaas oo ay tahay waxaa soo baxaya warar xooggan oo sheegaya in qaar ka mid ah Madaxda Maamul goboleedyada ay miiska soo saari doonaan, labo arrimod oo kala ah tirada ergooyinka dooraneysa xildhibaannada Aqalka hose iyo tirade degaannada ay doorashooyinku ka dhacayaan.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle, Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe, ayaa ku adkeysanaya in laga laabto heshiiskii 17-kii September, isla markaana qodobbadaas is badel lagu sameeyo, iyadoo tirada ergooyinka lagu soo celinayo 51, halka xarumaha doorashooyinku ka dhacayaanna laga dhigayo hal magaalo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, ayaan wax dhibaato ah ku qabin heshiiskii hore, wuxuuse garab taagan yahay damaca Axmed Madoobe, Qoorqoor iyo Lafta-gareen ayaa qudhoodu heshiiskaas isku si u arka.
Axmed Madoobe, ayaa ka cararaya dooraashooyinka loo qorsheeyay in ay ka dhacaan gobolka Gedo, halka Guudlaawe, uu walwal ka muujinayo sida u doorasho uga qaban karo Baladweyne oo hore loogu diiday in uu cagta saaro.